Hampita vaovao ofisialy mikasika izany ny polisim-pirenena anio raha vita ny fanadihadiana lalina. Miandry fanambarana miezinezina avy amin’ny zandarimariam-pirenena koa izay mbola anatin’ny fanadihadiana lalina sy famotorana momba ny resaka mandeha amin’ny trafikana taova sy io hala-jaza io ary ny resaka hafa toa mifono mistery ny mpanara-baovao. Tanjona, hoy ireo mpiandraikitra ny fandriampahalemana sy filaminana ny hanomezana vaovao feno ho an’ny olom-pirenena. « Hanangona ny vaovao avy amin’ireo rantsamangaika izahay tompon’andraikitra, indrindra ireo ato amin’ny faritra Analamanga dia hampitaina aminareo amin’ny fotoana mahamety azy », hoy ny tompon’andraikitry ny fampitam-baovao sy seraseran’ny zandarimariam-pirenena eo amin’ny Toby Ratsimandrava. Mitovy tsy misy valaka amin’izay ny fampitam-baovao avy amin’ny polisim-pirenena eo Anosy raha nanontanian’ny mpanao gazetinay. « Efa eo am-panangonana ny vaovao mahakasika io izahay eto anivon’ny polisim-pirenena. Hododosana ireo tompon’andraikitra fa ampintaina eo raha vao feno ny vaovao », hoy ny mpiandraikitra ny seraseran’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka eo amin’ny birao fiasany eo Anosy. Anisan’ny fepetra andrasana amin’ny mpitandro filaminana ny fanaraha-maso ny sekoly.